सुत्न तयार हुन्छिन् । किन ? – Dhungkharka
सुत्न तयार हुन्छिन् । किन ?
२१ श्रावण २०७५, सोमबार १२:३३
कुनै स्वास्नीमान्छे आउँछिन् । मैले त्यहाँ गएर तपाई लुगा खोलेर सुत्नुहोस् भन्यो भने उनी सुत्छिन् । जस्ती केटी भए पनि, वयोवृद्धा भए पनि, अधबैंसे भए पनि लुगा खोलेर सुत्न तयार हुन्छिन् । किन ? किनभने उसले डाक्टरलाई दिएको इज्जत हो यो ।
डाक्टरको विश्वासमा उसलाई थाहा छ कि म त्यहाँ उसलाई केही गर्दिँन । मेरो मनमा उसलाई उपचार गर्ने मात्रै हुन्छ । हुन त म साथमा अर्को मान्छे पनि राख्छु । तर, मैले उनलाई लुगा खोल्न लगाएँ वा छामें भने उनले एकचोटि चाइँचुइँ गर्दिनन् । किन त ?
हामी डाक्टरहरुलाई जनताले यत्रो भरोसा गरेका छन् । यो विश्वास कम हो ? आज कुनै पोलिटिसियनले कुनै केटीलाई सुत् भन्दा सुत्छे ? सुत्छे त्यो केटी ? आज कुनै अरु पेशाको मान्छेलाई तपाई मेरो कोठामा आएर सुत्नोस् भन्दा कोही सुत्छ ?
यसबाट बुझ्नोस् कि डाक्टरहरुलाई जनताले के विचार गरेका छन् ? कुन विचारमा हिँडाएका छन् ? डाक्टरमाथिको कस्तो विश्वास हो बिरामीहरुको ? डाक्टरले यसको गुन अलिकति पनि नफर्काउने बिरामीलाई ? अलिकति पनि नफर्काउने ? यत्ति पनि नफर्काउने ?
साभार : http://onlinekhabar.com